सडक भासिँदा दुई घर विस्थापित, आठ उच्च जोखिममा – Sulsule
सडक भासिँदा दुई घर विस्थापित, आठ उच्च जोखिममा
सुलसुले २०७७ भदौ ३० गते १५:३६ मा प्रकाशित
बागलुङ जिल्ला सदरमुकामको देउराली चोकमा ढलान गरेको सडक भासिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ ।एक हप्ता अघिमात्रै भासिएको सो सडकमा ट्याक्टर गुड्ने क्रममा दुर्घटना भएपनि मानवीय क्षति भने भएको थिएन । तर सडक दिन प्रतिदिन भासिदै जाँदा कुनै न कुनै दिन ठूलो दुर्घटना निम्ताउने देखिन्छ ।
सडक भासिन थालेपछि गत असोजमा रु. सात लाख खर्चेर मर्मत गरेपनि पुनः सडक भासिएर समस्या भएको बागलुङ नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष लक्ष्मी बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
“सडक मर्मतसम्भारका लागि हामी प्रयत्नशील छौं, जटिल भूगोल भएका कारण निरन्तर समस्या सृजना भइरहेको छ”, उनले भने, “नगरपालिकाले रु .पाँच÷सातलाख बजेट छुट्टाएर भए पनि तत्काल सडक मर्मत गर्नेछ ।”
उनका अनुसार सबै सडक पुरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि रु. ५० लाखको लागत अनुमानसहित प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग बजेट माग गरिएको छ । उक्त सडक भासिदा राजकपुर श्रेष्ठ र शशिकपुर श्रेष्ठको घर बस्नै नमिल्ने गरी चर्किएको बताइएको छ ।